प्रतीक Arhangela Mihaila सानो प्रान्तीय चर्च मा ठूलो laurels र विश्वासीहरूको घरमा देख्न सकिन्छ। किन यो बाइबलीय नायक मसीहीहरूको प्रेम र सम्मान उठाउँछ छ?
पद अनुसार, यो सेन्ट स्वर्गदूतहरू, आफ्नो कमान्डर को नेता छ। यो धर्मत्यागीहरू लड्न, लुसिफरको खसेको गलत भाषण गरेर प्रलोभनमा नगर्ने र प्रभु वफादार रहेका ती लागि भनिन्छ जसले थियो। तसर्थ, प्रतिमा Arhangela Mihaila सबैभन्दा सैन्य सबै बाँध्न को, Privates देखि उच्च आदेशमा revered। उहाँले हतियार को कमाल गर्न युद्धमा सुरक्षा र बल माग्दै गर्नुपर्छ। उच्चतम स्वर्गदूतहरू एक को स्मृति हालको पात्रोमा सेप्टेम्बर6श्रद्धा। हामी आफ्नो नेता नेतृत्व सबै स्वर्गदूतहरू को totality, आज भन्नुहुन्छ रूपमा यो यो दिन पवित्र चर्च 15 औं शताब्दीमा, नियुक्त छुट्टी "गिरजाघर" छ थियो वा। माइकल को उच्च स्थिति बस संकेत मा "कट्टर" उपसर्ग एक उज्ज्वल आत्मा संसारमा अन्य माथि उभिएका सबै को नाम को एक पहिचान हो।
योद्धा र सहायक
को प्रतिमा Arhangela Mihaila शैतानको ढलाउनु - सामान्यतया आफ्नो मुख्य उपलब्धि चित्रण गरिएको छ। त्यसैले, सबै को सबै भन्दा, उहाँले आफ्नो हात मा देशद्रोही को reeks र परमेश्वर र उहाँको समर्थकहरूको जो भाला वा तरवार, छ। यो मात्र होइन प्रत्यक्ष तर पनि allegorical अर्थ को छवि छ। लुसिफरको को छवि पनि सामान्यकरण, र मानिसहरूले perpetrated सबै iniquities को personification रूपमा बुझे गर्न सकिन्छ। अक्सर इस्राएलीहरूलाई आफूलाई जितेको जब यहोशू सहयोग गर्न सहित एक सहायक रूपमा कार्य गर्न स्वर्गदूतीय राजकुमार थियो प्रतिज्ञा भूमि। दानियललाई बेबिलोनको पतनको समयमा स्वर्गीय सेनाहरूका कमान्डर संग एक बैठक सम्मानित गरिएको थियो। तिनीहरूले क्रूसमा थियो जब मुक्तिदाता प्रधान दूत देशमा भनेर शोक खडा सकेन भनेर दुःखित र पुनरुत्थानको पछि दूर चिहानमा प्रवेश कवर पत्थर स्लैब hurried, र मानिसहरूलाई सुसमाचार ल्याउन।
पापी मरेका मुक्तिदाता
प्रतिमा मा Arhangela Mihaila मृतक नातेदार र साथीहरू लागि प्रार्थना गर्ने निर्णय गरे। यसलाई दुई पटक एक वर्ष, अर्थात् 19 सेप्टेम्बर र 21 नोभेम्बर, वास्तविक चमत्कार अदृश्य आध्यात्मिक संसारमा हुन्छ कि विश्वास छ। नरक (गेहेन्ना) को खण्ड को आगोमा गिर, आफ्नो छुट्टी दूत को रात मा, यो केही समयको लागि हाल्छ। त्यसपछि उहाँले Purgatory देखि जसलाई तिनीहरूले यस समयमा हार्ड प्रार्थना ती फिर्ता मौका दिइएको छ। मरेका कल नाम, साथै एक मसीही तपाईं आदम कुलका जाँदै, अनुसार Nameless र नातेदार शरीरका बारे सम्झना गर्न आवश्यक द्वारा हुनुपर्छ। यो जसको नाम शताब्दीयौंको हराएको छ ती, को सास्ती र दुःख बाट भाग्न सके सुनिश्चित छ। यो अवसर शैतानले संग लडाई मा आफ्नो heroism लागि प्रधान दूत अनुमति थियो। यस मामला मा, यो 12 बजे मा राति प्रार्थना गर्न imperative छ। , आगोको ताल संग दृष्टि विशाल कृमि, र शहीदहरूको उद्धारको swarming प्रकट भएको थियो Bogoslovu Ioannu मान्छे को राम्रो को लागि।
प्रार्थना र संरक्षण
प्रतिमा सेन्ट माइकल को प्रधान दूत मरेका तर जीवित लागि मात्र होइन प्रार्थना गर्नेहरूलाई मद्दत गर्छ। यो स्वर्गदूतहरूको राजकुमार लडे जो दुष्ट एक देखि छ - उनको अपील द्वारा सोध्ने उपचार बारे विरामीहरु, रूपमा सामान्यतः रोग भनेर विश्वास गरे। यो पनि घर को समर्पण मा प्रयोग गरिन्छ। यो घर बाहिर बाट आक्रमणबाट सुरक्षित गरिने विश्वास गरिएको छ। यो spirited मान्छे, र दुष्ट शैतानिक एकाइ दुवै बाइपास गर्छ। यो परिवार को जीवित सदस्यहरु प्रतिमा अघि प्रार्थना गर्न उपयोगी छ, त्यसपछि तिनीहरूले प्रलोभन, आध्यात्मिक कमजोरी सबै प्रकारका प्राप्त र विश्वासमा शङ्का हुनेछ। प्रधान दूत Grooms र बिल्डर्स को संरक्षक खडा। पुस्तक पुस्तकका र को पृष्ठ मा माइकल संसारको अन्तिम दिनमा महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने तथ्यलाई उल्लेख छ। रूस स्वर्गीय सेना को कमान्डर महिमा गर्न धेरै मन्दिर निर्माण मा, हरेक चर्च त्यहाँ एउटा प्रतिमा Arhangela Mihaila छ। प्रार्थनाको अर्थ overemphasized अतिरिक्त। उहाँलाई नाम हरेक इमानदार alms, सिद्ध मसीही, स्थलीय जीवन, माइकल भूल हुनेछ छैन जब हरेक राम्रो काम।
Svyaschennoispovednik Afanasiy Saharov र आफ्नो काम
कुलपिता Nikon - को अर्थोडक्स चर्च को एक प्रतिष्ठित आंकडा
तपाईं तनाव महसुस? केही अवस्थामा, तपाईं आफैलाई दोष छ?
हात दायाँ द्वारा दूध कसरी व्यक्त गर्ने?
कसरी घरेलु मा मशरूम बढ्न? मह बढ्दै mycelium को प्रविधि agaric
को MUP लागि योग्यता परीक्षा। के ठीक सञ्चालन गर्नुपर्छ, र यो किन गरिन्छ?
जबरदस्त सफ्टवेयर हटाउने: लोकप्रिय उपयोगिताहरूको एक अवलोकन
स्मार्टफोन लेनोभो S898T: एक सिंहावलोकन, विनिर्देशों, फर्मवेयर र मालिकको समीक्षा
कार्यक्रम, सल्लाह र सुझाव: राहत मा प्रशिक्षण
खेल "Dota 2" लबी मा टीम, Cheats र सुविधाहरू खण्डमा